नबिराउनु, नडराउनु: गल्ती नै नगरी ट्राफिकको कारबाहीमा पर्नुभयो ? यसरी गरौं उजुरी - Recent Nepal News
नबिराउनु, नडराउनु: गल्ती नै नगरी ट्राफिकको कारबाहीमा पर्नुभयो ? यसरी गरौं उजुरी
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०६, २०७३ समय: १५:२१:१०
काठमाडौं,पुस ६ – कहिलेकाँही मानवीय त्रुटि हुन जान्छ। त्यो ट्राफिक प्रहरीमा मात्र होइन, सबैमा लागू हुने कुरा हो । राजधानीमा बढ्दो सवारी चापको कारण निर्दोष सवारी चालक पनि कारबाहीमा पर्न सक्छ । कहिलेकाँही ट्राफिक प्रहरीहरु पनि झुक्किन सक्नेछन् । त्यस्तो घटना भने छिटपुट रुपमा मात्र हुने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले गल्ती नभई चिट काट्ने त कुरै भएन ।
कोहि सवारी चालकहरुले भने आफ्नो गल्ती नै नभई आफुलाई चिट दिएको भनि आक्रोश पोखिरहेको पनि हामी पाउछौं । ट्राफिक प्रहरीले अनाहकमा दुःख दिएको गुनासो धेरैले गर्छन्। तर यस्तो गुनासो गर्नेहरुलाई थाहा नहुन सक्छ कि ट्राफिक प्रहरीले जानीजानी वा नजानेर गल्ती गरेमा त्यसविरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले नै गल्ती गरेको प्रमाणित भएमा तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। यस्तो गल्ती धेरै हुने ठाँउमा पर्छ । माइतिघरबाट भद्रकाली जाने बाटो । त्यहाँ माइतिघरवाट आउने सवारी साधनले मात्र प्रवेश गर्न पाउछ । त्यो ठाँउमा सवारीको चाप भएको बेला ट्राफिक प्रहरी झुक्किन सक्छन ।
कसरी गर्ने उजुरी ?
यदि मर्कामा पर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि ट्राफिक प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। काठमाडौंको रामशाहपथमा रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३ मा सम्पर्क गरेर पनि तपाईँ यसबारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईँले ९८५१२९५१०० नम्बरमा एसएसएस गरेर पनि ट्राफिक प्रहरीलाई यसबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई परेका अन्य समस्या पनि यही नम्बरमा एसएमएस गरेर जानकारी लिन वा दिन सक्नुहुन्छ।
ट्याक्सी मिटरमा जान मानेन ? सर्वजनिक यातायातले भाडा बढी लियो ? आरक्षण सिटमा अरू नै बसेर यात्रा गरिरहेका छन् ? सार्वजनिक यातायातका छाडापनबाट तपाईं पीडित हुनुहुन्छ वा तपाईंका आँखाले देखेको छ भने अब त्यसको सरल समाधान गर्न सक्नुहुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले यस्ता समस्या समाधान गर्न एसएमएस सेवा सार्वजनिक गरेको छ ।
९८५१२९५१०० नम्बरमा सेवाग्रहीले सन्देश पठाएर गुनासो गर्न सक्नेछन् । तपाईंका गुनासा सीधै उक्त नम्बरमा पठाउनुभयो भने तत्काल ट्राफिक प्रहरी कारबाहीमा उत्रिनेछ ।
ट्राफिक नियममा थप कडाइ,यस्ता छन् नयाँ नियमहरु
कसरी बच्ने ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीवाट ?
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पुस १ गतेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरेको छ । त्यसवाट बच्नको लागि यी नियमहरुको पालना गर्नुभयो भने तपाईले कारबाही भोग्नुपर्ने छैन् ।
यी नियमहरुको पालना गर्नुभएन भने तपाई ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्नु हुनेछ ।
-निर्धारित भाडा भन्दा बढी भाडा लिई सवारी चलाएमा ।
– बाटो ईजाजत पत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएमा ।
– सवारीको स्वरुप परिवर्तन तथा मोडिफाई गरेमा ।
-वास्तविक नम्बर प्लेट नराखी आफुखुसी नम्बर राखी सवारी चलाएको वा चलाउन लगाएमा ।
– सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा ।
– सार्वजानिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी मालसामान वा सवारी राखेमा ।
– दुर्घटनामा परेको सवारी तथा यात्रीको हानी नोक्सानी पुयाएको वा सम्पर्कमा नआएमा ।
– मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा ।
-सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिएमा ।
-तोकिएको भन्दा बढि मालसामान राखेमा ।
– सवारीको वजन हद निर्धारण क्षेत्रमा बढि वजनको सवारी चलाएमा ।
– सवारीको अन्य भागमा मानिस तथा मालसामान राखेमा ।
– प्रयोजन बिपरीत सवारी चलाएमा ।
– सवारी आवागमनमा बाधा पुरयाएमा ।
– अरु सवारीलाई खतरा हुने किसिमले सवारी राखेमा ।
-छतमा यात्रु बोकेको वा राखेमा ।
– ट्राफिक संकेत वा ईसारा उल्लंघन गरी सवारी चलाएमा ।
– सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएमा ।
– सवारी मोड्न वा ध्वनि संकेत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेको वा ध्वनि दिएमा ।
– सडकमा गलत साईड तर्फबाट सवारी चलाएमा ।
– एकतर्फि सडकमा सो विपरित सवारी चलाएमा ।
– अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाएमा ।
– निर्धा्रित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा ।
-राती बत्ती नबाली सवारी चलाएमा ।
– सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाएमा ।
– नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा ।
– सवारीको वजनको हद निर्धारण गरिएको ठाउँमा वजन भन्दा बढी वजनको सवारी चलाएमा ।
-पेटी नबाँधी वा हेलमेट नलगाई सवारी चलाएमा ।
– सवारीमा बस्ने वा राख्ने मानिस वा मालसामानको हद निर्धा्रित गरिएकोमा सो हद भन्दा बढी राखी सवारी चलाएमा ।
– सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन ईन्कार गरेमा ।
– निर्धारित भाडा दर भन्दा बढी भाडा लिई सवारी चलाएमा ।
– लापरवाहीका साथ सवारी चलाएमा ।
-सवारी चालक अनुमित पत्र, सवारी दर्ता किताब, सवारी ईजाजत पत्र साथमा नराखी सवारी चलाएमा ।